Seasons any Kildare - IntoKildare
Manomboka amin'ny andro lohataona mangatsiaka ka hatramin'ny hariva fahavaratra volamena lava ary amin'ny alina ririnina milamina, Kildare dia manana zavatra tokana atolotra isaky ny vanim-potoana.
Amin'ny maha-Nosy i Irlanda, dia somary malefaka ihany ny maripana mandritra ny taona. Ny volana Janoary sy Febroary no volana mangatsiaka indrindra, ary ny Jolay ny volana mafana indrindra amin'ny taona. Ny Irlandey dia tia miresaka momba ny toetrandro ary manome ny toetrany miovaova matetika ianao dia maheno ny olona miresaka momba ny 'vanim-potoana efatra ao anatin'ny iray andro' izay midika hoe rehefa miomana hijanona ao Kildare ianao dia miomàna amin'ny zava-mitranga rehetra!
Azonao atao ny manamarina ny toetr'andro Kildare amin'ny Tranonkala Met Eireann.
Rahoviana no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Kildare?
Summer no fotoana malaza indrindra hitsidihana an'i Kildare. Mandritra ny volana jona sy jolay ary aogositra dia mihabetsaka ny mpitsidika, rehefa tonga avy any ampitan-dranomasina ny olona rehefa mafana kokoa ny andro. Miaraka amin'ny ala sy ambanivohitra ary feno fiainana, ary mamelana tanteraka ny lohataona, ny fahavaratra no fotoana mety indrindra hankafizanao ny fitsangantsanganana an-tsambo eny ambanin'ny lakandrano, ny fitsangatsanganana an-tongotra ary ny fisasarana antoandro tolakandro tao amin'ny zaridainan'ny labiera.
Raha tianao ny mankafy andro mafana, saingy amin'ny vitsy ny vahoaka, ny fotoana tsara indrindra mankany Kildare dia ao lohataona. Nanomboka tamin'ny martsa ka hatramin'ny mey dia nafana ny andro - saingy nihavitsy ny vahoaka. Topazo maso ny ety ivelany feno loko sy fiainana miaraka amin'ny andro malefaka sy ny rivotra madio be.
Nandritra fararano, mirongatra ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany, midika fotoana tsy dia be atao mandritra ny taona hijerena ireo velaran-tany ala any Kildare, angamba hahazoanao toerana sasany malaza kokoa aza. Ny toetr'andro amin'ny fararano dia mety ho wildcard kely - matetika isika dia mahazo herinandro mahafinaritra vitsivitsy amin'ny volana septambra. Mariho fa ny volana Oktobra no statistikan'ny volana ambany indrindra, saingy Halloween ihany koa ary rehefa manomboka mampiseho ny lokony ny tena fahalehibeazana amin'ny fararano.
irlandey ririnina dia miavaka amin'ny andro fohy sy ny alina lava, fa amin'ny vanim-potoana hatramin'ny Krismasy dia tsy afaka mandresy ny fanahy fety amin'ny rivotra ianao. Fonosy mafana ary mandehana fitsangatsanganana mampihetsi-po ary avy eo midina miaraka amin'ny Guinness eo alohan'ny afo ao anaty trano fisotroana mahafinaritra.
Martsa - Mey
Jona - Aogositra
Septambra - Novambra
Desambra - Febroary